कसरी सानो बिरालामा पखाला रोक्न Noti बिरालाहरू
कसरी सानो बिरालामा पखाला रोक्न
लौरा Torres प्लेसहोल्डर छवि | | जिज्ञासा, रोगहरू
पखाला एक लक्षण हो कि जब यो बिरालोको मा हुन्छ, एक धेरै गम्भीर समस्या हो। सानोलाई बढ्नको लागि धेरै खानु आवश्यक छ, तर यदि त्यो खाना राम्रोसँग पचिएन र छिटो बाहिर निकालियो भने, शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त हुँदैन। जब त्यो हुन्छ, मात्र वृद्धि बन्द हुन्छ, तर पनि जनावरको जीवन खतरामा छ.
यस कारणका लागि, प्यारी राम्रोसँग अवलोकन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि यो बिरामी परेको खण्डमा आवश्यक उपायहरू गर्न सक्षम हुन। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि, म तपाईंलाई भन्दैछु किन यो लक्षण देखाउन सकिन्छ र कसरी सानो बिल्लीमा पखाला रोक्न.
1 पखाला भनेको के हो?
1.1 तीव्र पखाला बनाम तीव्र पखाला
1.2 विचार गर्न को लागी यदि तपाइँको बिरालाको पखाला पखाला छ
2 किन मेरो बिरालाको पिटला पखाला हो?
2.1 यसको के लक्षणहरू छन्?
3 मेरो बिरालालाई पखाला लाग्यो र यो जाँदैन, म कसरी पखाला रोक्न सक्छु?
3.1 यदि मेरो बिरालाको पखाला पखाला लागेको छ भने म घरमा के गर्न सक्छु?
3.2 मेरो बिरालोको भोक बढाउन म के गर्न सक्छु?
पखाला भनेको के हो?
आधारभूत तरिकामा, यो भन्न सकिन्छ कि पखाला तपाईको बिल्लीको बच्चाको मल को स्थिरता मा कुनै कमी छ, जो सामान्यतया शौच को फ्रिक्वेन्सी मा वृद्धि संग साथ छ।
तीव्र पखाला बनाम तीव्र पखाला
हामी कुरा गर्छौं पुराना पखाला जब बिरालोको एक छ मल स्थिरतामा परिवर्तन plus देखि १० दिनसम्म लगातार वा रुकावटमा। जबकि, तीव्र पखाला, त्यो के हो सामान्यतया करीव days दिन हुन्छ.
यस भिन्नताले तपाइँको पशु चिकित्सकलाई तपाइँको बिरालोको लागि सम्भावित सम्भावित कारणहरू र बिमारीहरू निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। युवा बिरालाहरु को मामला मा, उदाहरण को लागी परजीवी वा भाइरल रोग को कारण एक्यूट डायरिया Panleukopenia। जे होस्, पुरानो बिरालाहरुमा पखाला पखाला धेरै सामान्य हुन्छ भडकाउने, नियोप्लास्टिक (ट्यूमर) वा अन्तःस्रावी प्रक्रियाहरुका कारण (बिरालाहरुमा हाइपरथायरॉइडिज्म सामान्य छ)।
विचार गर्न को लागी यदि तपाइँको बिरालाको पखाला पखाला छ
यदि एक दिन तपाईको बिरालाको नक्कल मल छ भने चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। जहाँसम्म, उसले दिनभरि निरन्तर पखाला गर्न थाल्छ र भोलिपल्ट जारी रहन्छ भने, तपाईं आफ्नो विश्वासिय पशु चिकित्सा केन्द्रमा जानु पर्छ, यो गम्भीर समस्या हुन सक्छ।
जब तपाइँ पशु चिकित्सकमा जानुहुन्छ, तिनीहरूले तपाइँलाई प्रश्नहरूको शृंखला (anamnesis) सोध्छन् जुन पहिले थाहा पाउन कहिल्यै दुख्दैन किनकि यसले तपाइँको बिरालाको बच्चालाई के हुन्छ भन्नेबारे अझ राम्रोसँग वर्णन गर्न मद्दत गर्दछ र पशु चिकित्सकले निदानलाई सजिलो बनाउँदछ। यस कारणका लागि, म प्रश्नहरूको प्रकार संलग्न गर्न गइरहेको छु जुन उनीहरूले तपाईंलाई तल सोध्छन्:
तपाईलाई दिनमा कति चोटि झाडापखाला लाग्छ?
पूपहरू हाल कुन रंगमा छन्?
के तपाई पप गर्दा पीडा भएको जस्तो देखिन्छ?
के तपाईंले पपमा रगत देख्नुभयो?
के त्यहाँ घरमा धेरै बिरालाहरू छन्?
के घरका अन्य जनावरहरू प्रभावित छन्?
के मलको मात्रा बढेको छ?
के तपाईं उसलाई स्यान्डबक्समा दगुर्दै देख्नु भएको छ, जरुरी छ?
के तपाईं स्यान्डबक्समा पुग्नु भन्दा पहिले पप गर्नुहुन्छ?
के तपाईंले आफ्नो मलमा बलगम देख्नुभयो?
के पप प्यासी वा तरल जस्तै छ?
के तपाईंको बिरालोको वजन घटेको छ?
के तपाईंको बिरालाको बच्चा पखाला शुरू भएदेखि बान्ता भयो?
तपाईलाई पखाला कहिले भयो र कहिले तपाईले ती पाउनु भयो?
तिमी अहिले के खादै छौ?
के तपाईंले भर्खर तपाईंको खानामा परिवर्तनहरू गर्नुभयो?
के तपाइँ डिउर्मेड हुनुहुन्छ र अन्तिम पटक कहिले थियो?
प्रश्नहरूको यो ब्याट्री अतिसारको उत्पत्ति वर्गीकृत गर्न र कारण निदान गर्न सक्षम हुन प्रयोग गरिन्छ। यहाँबाट, पशु चिकित्सकले कम वा कम तपाइँको बिरालाको बच्चा कस्तो अवस्था हुन सक्छ र सम्बन्धित टेस्टहरू पूरा गर्न सुरू गर्न सक्नेछ।
किन मेरो बिरालाको पिटला पखाला हो?
युवा बिरालाहरूमा पखाला विभिन्न कारणहरूले देखा पर्दछ: आन्द्रा परजीवीहरू, आहारमा अचानक परिवर्तन, संक्रमण, कोलाइटिस वा खाना एलर्जी। सब भन्दा साधारण पहिलो दुई हुन्, तर जे भए पनि तपाईले पशु चिकित्सकलाई तुरून्त जानु पर्छ बिरालालाई नराम्रो हुँदै जानबाट जोगाउन।
यसको के लक्षणहरू छन्?
हामी जान्न सक्छौं कि बिरालोको बच्चालाई समस्या छ जब धेरै पटक शौच। The मल ढीला र बग्दो हुन् (धेरै पानी संग) र तिनीहरूले रगत बोक्न सक्छन्। साथै, तरल पदार्थ घाटाको कारण तपाईं डिहाइड्रेट हुन र वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ.
अर्को लक्षण देखा पर्नेछ उदासीनता। बिरामी परेको बिरालोको बच्चाले केहि गरिरहेको जस्तो नहुन सक्छ, यस्तो कुराले हामीलाई सचेत गराउनुपर्दछ। यद्यपि बिरालाको बच्चाहरू जहिले पनि उदासीनता देखाउँदैनन्, किनकि मैले पोष्टको सुरूमा भनें, तिनीहरू मास्किंग रोगका मालिकहरू हुन्।
मेरो बिरालालाई पखाला लाग्यो र यो जाँदैन, म कसरी पखाला रोक्न सक्छु?
यद्यपि हामीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहोस्। एक जवान बिराला भएको कारण, यसको प्रतिरक्षा प्रणाली अझै कमजोर छ र यसले यसलाई अझ कमजोर बनाउँछ। हामीले कहिले पनि औषधी दिनै पर्दैन यदि यो पेशेवरको सल्लाहमा छैन भने हामी अवस्था झनै बिग्रन सक्छौं। क्लिनिकमा उनीहरूले हामीलाई यसको उपचार कसरी गर्ने भनेर बताउँदछन् ताकि यसले सुधार गर्दछ।
म तपाईंलाई परिस्थितिको वर्ग छोड्दछु जहाँ तपाईं आफ्नो पशु चिकित्सा केन्द्रमा जान पर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईंको बिरालाको पखाला पखाला छ भनेः
यदि तपाईंको बिरालाको बच्चा एक बर्ष भन्दा कम पुरानो हो र तीव्र पखालाबाट सुरू हुन्छ।
यदि तपाईंको किट्टी धेरै सक्रिय छैन भने, उनी खाने जस्तो महसुस गर्दिनन् र निर्जलित देखिन्छन्।
यदि तपाइँ रगत र / वा म्यूकसको बाँकी रहेको तरल डायरिया अवलोकन गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग दिनको क्रममा २- liquid तरल मलहरू छन्।
यदि तपाईंको बिरालाको बच्चाले अर्को बिरालाहरूसँग पानलेकुपेनियाको साथ सम्पर्क राखेको छ।
यदि मेरो बिरालाको पखाला पखाला लागेको छ भने म घरमा के गर्न सक्छु?
जे भए पनि, पशु चिकित्सा हेरचाह मात्र पर्याप्त हुँदैन। घरमा हामीले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि उसले पानी पिए र उसले उच्च गुणस्तरको बिरालोको खाना खाइरहेको छ। यदि तपाईं उसलाई क्यान दिँदै हुनुहुन्छ र उसले आफ्नो सामान्य फिड भन्दा कम पानी पिउँछ भने, अत्यधिक चिन्ता नलिनुहोस्, यो सामान्य हो, किनकि भिजेको खानाले उसले पानीको अंश पाउँछ।
त्यसपछि, हामी तपाइँको बिरालाको पखाला पखाला हुँदा पछ्याउन केहि सिफारिसहरू हामी तपाइँलाई छाड्दैछौं:
एक बनाउनुहोस् १२ घण्टा ठोस छिटो.
१२ घण्टा पछि हामी तपाईंलाई पाचन समस्याहरूको लागि निर्दिष्ट अत्यन्त पचाउने आहार प्रस्ताव गरेर शुरू गर्दछौं। बजारमा त्यहाँ केही पशु चिकित्सकहरू छन्, म तपाईंलाई धेरै आहारहरूको लिंक दिन्छु जुन धेरै राम्रो तरीकाले जान्छन्।
पहाडको बिचमा I / D भिजेको खाना
रोयल क्यानिन बिरालाहरुका लागि भिजेको आमाशय
Purina EN gastroenteric भिजेको बिरालो खाना
यी आहारहरू तपाईं तिनीहरूलाई विशेष स्टोर र पशु चिकित्सा क्लिनिकहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
हामी तपाईंलाई पहिले दिन्छौं भिजेको खाना थोरै मात्रामा र धेरै बारम्बार। तपाइँलाई एक विचार दिनको लागि, २- 2-2 चम्चा हरेक २- table घण्टामा।
यी फीडिंग दिशानिर्देशहरूको साथ 12-24 घण्टा पछि हामी एक ठोस आहार को एक बिट परिचय गर्न मा गए. यो जठरांत्र समस्याहरूका लागि पनि विशिष्ट हुनुपर्दछ। मैले तपाईंलाई माथि नाम दिएका ब्रान्डहरूमा पनि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याहरूको लागि विशेष फिड छ। हामी क्यानको साथ फिडको केही सानो अनाजहरू मिक्नेछौं।
अर्को २ hours घण्टामा हामी तपाईंलाई भिजेको खाना भन्दा बढि फिड प्रदान गर्ने छौं, अन्त सम्म म सोच्न खाएको मात्र।
केही दिन पछि जसमा उसलाई अधिक पखाला वा नरम पप छैन, हामी उसको सामान्य फिडमा फर्कन सक्छौं। तिनीहरूको सामान्य फिडमा फिर्ता परिचय बिस्तारै days--4 दिनहरूमा गर्नु पर्ने हुन्छ, वेटरनरी प्रिस्क्रिप्शन फिडलाई मिसाईरन जुन उसले सामान्यतया खान्छ।
यो लोकप्रिय रूपमा विश्वास गरिएको छ कि उमालेको चामलको ब्रोच वा ब्रेडक्रम्ब्स दिन उचित छ। तर वास्तविकता यो छ कि जठरांत्र सम्बन्धी समस्याहरूको लागि एक विशिष्ट आहारको साथ तपाईंको बिरालाको बच्चामा पौष्टिक कमीहरू हुँदैन, र सबैभन्दा मुख्य कुरा यो "गृह उपचार" को तुलनामा द्रुत बहाली हुनेछ।
यी तीन ब्रान्डको क्यानको मूल्य € १.1,89 and र € .. between को बीचमा हुन्छ, क्यानको आकारमा पनि निर्भर हुन्छ। र फिड सामान्यतया -3,5 २०-२20 को आसपास हुन्छ।
पोषण, दुबै हिल र रोयल क्यानिन र पुरिना यी उत्पादनहरूमा प्रिबायोटिकहरू, कम फ्याट र प्रोटीन समावेश गर्दछ तिनीहरूलाई अत्यधिक पचाउन योग्य बनाउन।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा हिलको उत्पादनहरू एकदमै मनपर्दछ किनकि यसको एक छ palatability धेरै माथि। यसको मतलब यो हो बिरालोको बच्चाले यसको स्वाद फेला पार्छ र धेरै रमाइलो गन्ध लिन्छ, त्यसोभए तपाइँले "ट्रिक" खानको लागि रिसोर्ट गर्नुपर्दैन। तिनीहरूसँग भिजेको खानाको एक किसिमको प्रकार पनि हुन्छन् जस्तै पेटा र अर्को स्ट्युमा, जुन पछि विशेष रूपमा, उनीहरूलाई यो मनपर्दछ!
यहाँ लिंकहरू छन् यदि तपाईं यी उत्पादनहरूका बारे बढि जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
ध्यानमा राख्नको लागि अर्को अवस्था यो हो कि तपाईंको बिरालाको बच्चा पहिलो केही दिन खान नखान सक्छ। तसर्थ, तपाईंले दिनु पर्छ "जबरजस्ती खाना"। यो गर्नका लागि तपाईले पशु औषधीको सामग्री थोरै पानीको साथ मिलाउनु पर्छ। यो पर्याप्त हल्का हुनुपर्दछ कि यसलाई सिरिन्जसँग अवशोषित गर्न सकिन्छ। म तपाईंलाई एक १० मिलि अनावश्यक सिरिंज छनौट गर्न सल्लाह दिन्छु, र तपाईंले लिनु भएको रकमलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। उसलाई निल्नको लागि समय दिनको लागि विशेष ध्यान राख्नुहोस्, त्यसैले हामी निसासिनबाट जोगिनेछौं।
यो पनि सकारात्मक छ प्रोबायोटिक्स प्रदान गर्नुहोस् कोमो फोर्टिलोरा® बिरालाहरूको लागि (यहाँ तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ)। निश्चित रूपमा तपाईको विश्वसनीय पशु चिकित्सकले उनीहरुलाई सल्लाह दिन्छ
मेरो बिरालोको भोक बढाउन म के गर्न सक्छु?
तपाईंको बिरालोको भोक बढाउन राम्रो चाल भनेको गीला खानालाई माइक्रोवेभमा गर्मीको थोरै स्पर्श गर्नु हो, यसले गन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदछ, साथै न्यानो हुँदा यसलाई खानु बढी रमाइलो पनि हुन्छ।
यसको अतिरिक्त हामीले उसलाई धेरै माया गर्नुपर्नेछ ताकि तपाईसँग सामर्थ्य छ। र सबै भन्दा माथि धैर्य गर्नुहोस्, उसलाई सान्त्वना नदिनुहोस् यदि उसले आफ्नो स्यान्डबक्सबाट बाहिर निकाल्छ, नबिर्सनुहोस् ऊ खराब छ, यो होइन कि यो विद्रोहको कार्य हो।। म आशा गर्दछु कि यो पोष्टले तपाईलाई मद्दत गरेको छ र सम्झना छ कि पशु चिकित्सक एक हो जसले तपाइँको बिरालाको बच्चालाई साँच्चै सहयोग गर्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » कसरी सानो बिरालामा पखाला रोक्न
तपाईंको बिरालोको लागि सबै
तपाईंको बिरालाको ख्याल राख्नुहोस् किनकि उहाँ हाम्रो सिफारिसमा योग्य हुनुहुन्छ र उसले प्रेम गर्दछ। थप रूपमा, तपाईले अब केहि अफरहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ:
निन्दक बिरालो भनेको के हो?
मेरो बिरालाको नाक सुख्खा छ, के यो सामान्य छ?
बिरालाहरूको बारेमा भर्खरको लेखहरू पाउनुहोस्।
Cat बिरालो खाना र सामान मा छूट